Dabley loo maleynayo iney yihiin Alshabaab oo dad ku dilay Wajeer * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dabley loo maleynayo iney yihiin Alshabaab oo dad ku dilay Wajeer
By A warsame	 Last updated Mar 18, 2015
Mareeg.com: Afar qof ayaa ku dhimatay weerar rag loo maleynayo iney ka tirsan yihiin Al-Shabaab ay xilli dambe oo shalay ahayd ka gaysateen degmada Wajeer ee gobolka Waqooyi-bari Kenya.
Dableyda ayaa rasaas ku furtay koox dad ah oo ku sugnaa dukaan ku yaalla bartamaha magaalada, iyada oo adeegsanaysay qaraxyo, sida ay xaqiijiyeen dad goob-joogeyaal ah.
Maxamed Siyaad, oo ka tirsan saraakiisha maamulka deegaanka ee dowladda Kenya ayaa sheegay in saddex qof ay dhimatay kaddib markii maleeshiyada weerarka soo qaadday ay dukaanka dusha uga xirtay kaddibna dab qabadsiisay, halka qofka afaraadna uu dhintay markii isbitaalka la dhigay.
Al-Shabaab oo sheegatay mas’uuliyadda weerarkaas ayaa toddobaadkan dhowr qof ku dishay weerarro ay ka gaysatay deegaannada ku dhow xuduudda ay Kenya la wadaagto Soomaaliya.
RW Cumar C/rashiid oo kulan la qaatay Amiirka dalka Qadar